Telegram na WhatsApp: Fa maninona no i TG no App tian'ny mpampiasa Linux? | Avy amin'ny Linux
Telegram na WhatsApp: Fa maninona no i TG no App tian'ny mpampiasa Linux?
Ho antsika tia Rindrambaiko maimaim-poana, loharano misokatra ary GNU / Linux, dia mazava fa raha ny amin'ny fampiasana Telegram (TG) na WhatsApp (WA)Tianay ny voalohany alohan'ny faharoa, mba hifandraisana amin'ireo mpiara-miasa mitovy hevitra amintsika, ary hizara na hanaparitaka ny fitiavantsika an'ity sehatry ny fahalalana ity amin'ny hafa.
Saingy marina Fa maninona no Telegram no fampiharana fandefasan-kafatra tiany ho an'ny Linuxeros?
Alohan'ny hijerenao tanteraka ny antony na ny antony manosika, ary tsy hanao an'ity fanontana ity be loatra, dia manasa anao izahay handinika ireo zavatra navoakanay teo aloha telegrama, izay heverin'ny maro ho ambony noho WhatsApp, na inona na inona Linuxeros na tsia.
Hatramin'izao telegrama ho azy fahafaha-manao lehibe y firoboroboana endrika sy fanavaozana, dia ampiasain'ny sehatra toa an'i marketing ny vokatra, entana ary serivisy, nentim-paharazana sy tsy nentin-drazana (niomerika).
Telegram: Vaovao, asa ary tombony ho an'ny kinova ankehitriny
Telegram: Manambara fa nahatratra 400 tapitrisa ireo mpampiasa
"Telegram dia uNy fampiharana fandefasan-kafatra mifantoka amin'ny hafainganam-pandeha sy haingana dia haingana, tsotra ary maimaim-poana. Azonao atao ny mampiasa Telegram amin'ny fitaovanao rehetra amin'ny fotoana iray. Ireo hafatrao dia ampifanarahana tsara amin'ny alàlan'ny telefaona, takelaka na PC anao". Inona ny Telegrama?
1 Telegram: fampiharana fandefasan-kafatra tian'ireo Linuxeros
1.1 Antony Linuxe aleony Telegram
1.2 Antony hafa
Telegram: fampiharana fandefasan-kafatra tian'ireo Linuxeros
Izaho manokana dia mampiasa telegrama saika ny zava-drehetra, satria, toa ny maro izay efa nampiasa azy, dia raisiko izany telegrama mahafeno ny kely indrindra ilaina rehetra ary bebe kokoa, amin'ny fampiasana azy io amin'ny maha fampiharana hafatra ihany. Na izany aza, efa fantatsika fa ny tanjon'ny voninahitra eto hahatratrarana izany tanjona izany dia ny fianakaviantsika, ny namantsika, ny mpiara-mianatra amintsika na ny asa ataontsika, ny mpanjifa na ny mety ho mpanjifa, mifindra monina Ary koa telegrama.
Momba io teboka ao amin'ny isan'ny mpampiasa sehatra, maro amintsika no nahita tamin'ny vaovao momba telegrama, izay ihany dia amin'ny fitomboana tsy tapaka an'ny mpampiasa azy. Ary maro no ao anatinako, afaka nahita ny fomba ifandraisanay, ny Linuxeros na tsia, miditra amin'ny sehatra isaky ny misy izany fihenam-bidy lehibe manerantany na tonga amin'ny hazavana dia mamoaka fanairana vaovao momba ny a marefo, tsy fahombiazana na malpractice fiarovana, fiainana manokana na natiora hafa.
Antony Linuxe aleony Telegram
Fohy sy amin'ny filaharan'ny zava-dehibe, raha ny fijeriko azy ho Linuxero, Heveriko fa ireo no antony mahazatra sy mahazatra indrindra izay aleontsika Telegram hisolo ny WhatsApp:
Izy io dia manana mpanjifa multiplatform malalaka sy misokatra, izay tsy mandany loharanom-pahalalana firy (RAM / CPU) ary kely kokoa ny bateria, amin'ny fitaovana sy fitaovana anaovana azy io.
Manome fiantohana bebe kokoa sy fiasa ara-teknolojian'ny fiarovana, fiainana manokana ary ny tsiambaratelo.
Ny fisian'ny Vondrona, Supergroups ary fantsona izay manamora anay hiasa amin'ny fiaraha-monina ary hitazona ny fahalalantsika izany.
Ny fisian'ny fitaovana Telegraph, hamoronana lahatsoratra (hafatra lava / lava) ary hanamorana ny fandefasana sy ny fijerena azy ireo (fijerena haingana) amin'ny alàlan'ny chat na fantsona.
Ny fanolorana bot bota feno asa sy fahaiza-manao mba hanatanterahana asa, na informatika, antonony vondrona na mpampiasa, na mpanohana (fandikana an-tsoratra, fanovana ny kabary am-bava, fitantanana fampahalalana, ankoatry ny hafa).
Ny fahaiza-manaon'ny rafitry ny fandrefesana azy, izay azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetra, manomboka amin'ny fanapahan-kevitra momba izay Distro, Desktop Environment, Window Manager, na entana Linuxero hafa, hatramin'ny fanomezana hevitra na fandaminana ny tenantsika, amin'ny alàlan'ny fari-piainan'ireo karazany telo ankehitriny fanadihadiana.
Ny karazan-tarika, Supergroups ary fantsona marobe efa misy karakarain'ny Thematic Linuxeras, izay maro amin'izy ireo dia avy amin'ny tranonkala malaza na ekena, toy ny Blogs, ary koa ny fantsona ofisialin'i Telegram avy amin'ny FromLinux.
Azo antoka fa hanana antony bebe kokoa isika, toy ny fampiasana na tsia ny sticker (static sy animated), ny tonian-dahatsoratry ny sary, ny mpilalao horonan-tsary, ny tranokala mirindra, ankoatry ny hafa, saingy heveriko fa izany Antony 7 voalaza etsy ambony no zava-dehibe indrindra tokony ho Linuxeros amin'ny Telegram, talohan'ny WhatsApp.
Aza adino, isaky ny te hahalala bebe kokoa ianao Telegram sy amin'ny teny espaniola, azonao atao ny mijery mivantana ny fizarana fanontaniana ofisialy amin'ny Espaniola, izay tompon'ny tranonkalanao. Ary ao amin'ny anglisy, azonao atao ny manamarina tsindraindray ny Blog raha te hanana vaovao misimisy kokoa momba ny daty na ny anao fizarana evolisiona mijanona ho vaovao hatrany amin'ny fivoarany.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny antony «¿Por qúe Telegram es la Aplicación de Mensajería preferida de los Linuxeros», amin'ny fampiharana nentim-paharazana, ara-barotra sy be mpampiasa an'ny WhatsApp, dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Ary raha mila fanazavana fanampiny, aza misalasala mitsidika an'izay Tranomboky amin'ny Internet como el OpenLibra y jedit mamaky boky (PDF) momba an'io lohahevitra io na ny hafa faritra fahalalana. Amin'izao fotoana izao, raha tianao izany «publicación», aza atsahatra ny fizarana azy miaraka amin'ny hafa, ao amin'ny Tranonkala, fantsona, vondrona na vondrom-piarahamonina ankafizina ny tambajotra sosialy, aleo malalaka sy misokatra ho Mastodon, na azo antoka sy tsy miankina toa TG.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Telegram na WhatsApp: Fa maninona no i TG no App tian'ny mpampiasa Linux?
Mikhail dia hoy izy:
fampiharana telegramm herunterladen: telegramm.app/download
Valiny tamin'i Mikhail
Ny kinova vaovao an'ny mpamily AMD Radeon 20.30 dia efa misy izao
BerryWM, Blackbox, BSPWM, Byobu ary Compiz: WM hafa 5 ho an'ny Linux